करिब १५० वर्ष अगाडी कस्तो थियो काठमाडौँ ? हेर्नुस भिडियो - Koshi Online
करिब १५० वर्ष अगाडी कस्तो थियो काठमाडौँ ? हेर्नुस भिडियो
एजेन्सी, असार २९
इतिहासका बिभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजबंशले शासन गरेको यो नगर नेपालको एकिकरण देखि नेपालको राजधनीको रूपमा रहेको छ। काठमाडौं उपत्यका भित्र पर्ने यो सहरमा राष्ट्रपति निवास तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय (सिंहदरवार), नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालय मन्त्रालयहरू, प्रायः सबै केन्द्रीय कार्यलयहरू, सरकारी तथा निजी टेलिभिजन स्टेसनहरू तथा थुप्रै सरकारी तथा निजी रेडियोहरू तथा समाचार संस्थाहरू रहेका छन। नेपाली सेनाको केन्द्रीय कार्यालय जंगी अड्डा, सशस्त्र प्रहरी-बलको प्रधान कार्यालय तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय पनि यही रहेका छन् ।
महाचीनबाट बुद्ध धर्मका बोधिसत्त्व मञ्जुश्रीले यस दहमा आलौकिक रश्मि देखेर यहाँ मानव वस्ती निर्माण गर्ने निधो गरे। उनले यस दहको दक्षिणमा रहेको कच्छपाल पर्वतमा चन्द्रह्रास खड्गले प्रहार गरेर यहाँको पानी निकास गरिदिए। तत्पश्चात, वर्तमान काठमाडौँमा मञ्जुपत्तन नामक एक नगर स्थापना गरी धर्माकारलाई त्यस नगरको राजा बनाएर आफू चीनतर्फ लागे। वर्तमान काठमाडौंको मजिपात (मञ्जुपत्तनको अपभ्रंश)मा रहेको मञ्जुश्रीको मन्दिरलाई सो प्रथम सभ्यताको केन्द्रको रुपमा सांस्कृतिक रुपमा लिइने गरिन्छ।
काठमाडौं केन्द्रित किरात राजा यलम्बरले महाभारत युद्धमा सहभागी भएको भन्ने विश्वास छ। साथै, सातौं किरात राजा जितेदास्तीको समयमा बुद्ध वा बौद्ध भिक्षुहरु काठमाडौं उपत्यका आएको पनि ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएको छ। यसकालमा काठमाडौँमा यम्बु भन्ने मुख्य वस्ती थियो र यँगाल भन्ने (मञ्जुपत्तन निकट) सानो वस्ती थियो। काठमाडौंलाई अहिले पनि केही भोट-बर्मेली भाषाहरुमा यही नामबाट “यम्बु” भनिने गरिन्छ। साथै, नेपालभाषामा काठमाडौंको नाम येँ पनि यही शब्दबाट उत्पन्न भएको नाम हो।
विकिपीडिया तथा युट्युबको सहयोगमा
जुँगा पाल्दा मासिक तलब पाइने
एउटा यस्तो गाउँ, जहाँ आगनमा चिहान नभएको घरै छैन्
सम्पन्न भएको विवाह एक सय रुपैयाँ दक्षिणाको विवाद भएपछि रद्ध
जागिरका लागि लिखित परिक्षामा गधालाई प्रवेशपत्र दिईएपछि
चीनमा मान्छेहरुले किन खान्छन् साङ्लाको जुस ?
ताजा हावा लिन यात्रुले जहाजको इमर्जेन्सी ढोका खोलेपछि…